अत्तरियामा अलपत्र मजदुर र विद्यार्थी : तीन दिन भयो खाना पाएका छैनौं, अब कहाँ जाने ? - बडिमालिका खबर
अत्तरियामा अलपत्र मजदुर र विद्यार्थी : तीन दिन भयो खाना पाएका छैनौं, अब कहाँ जाने ?
काठमाडौं । नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशभर लकडाउन जारी छ । दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गर्ने र विद्यार्थीहरु बढी चपेटामा परेका छन् ।
लकडाउन बढे सँगसँगै कोरोना संक्रमणको अवस्था पनि बढ्दै गएको छ । हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ६७५ पुगिसकेको छ भने चारजनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । सरकारले लकडाउनका कारण पीडित मजदुर, अलपत्र विद्यार्थी, रोजगारी गुमाएकाहरुलगायतका लागि कुनै राहत अथवा सहयाता उपलब्ध गराएको छैन । स्थानीय सरकारले पनि उनीहरुको पहलका लागि खासै ध्यान दिएको छैन ।
लकडाउन बढ्दै जाँदा खाद्यान्‍न र पैसा सकिएपछि पैदल हिँडेरै भए पनि दैनिक सयौं मानिसहरु गन्तव्यतर्फ गइरहेका छन् । यस्तैमध्येमा ४६ जना मजदुर कैलालीको अत्तरिमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।
झापामा अलपत्र परेका उनीहरु तीन दिनअघि नेपाली सेनाको सहयोगमा गाडी चढाएर आ-आफ्नो प्रदेशमा पठाइयो । त्यसअघि उनीहरु भद्रपुर बहुमुखी क्याम्पसको क्‍वारेन्टाइनमा चार दिन बसेका थिए । त्यहाँ उनीहरुलाई धेरै दिन राख्‍न नसकिने र भातरबाट आउने क्रम जारी रहेकाले उनीहरुलाई आ-आफ्नो प्रदेश पठाइयो । भारतका विभिन्‍न ठाउँबाट आएका केही मजदुर र झापामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु गरी ४६ जना सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका लागि गाडी चढे ।
उनीहरुसँगको भएको पैसा पनि सकिएको र बाटामा केही खाना खुवाउने होटलहरुसमेत नभेटाएपछि भोकभोकै कैलालीको अत्तरिया पुगे । गाडीवालाले उनीहरुलाई त्यहीसम्म मात्र छोड्नसक्ने भन्दै त्यही ओरालिदियो र गाडीवालाले उनीहरुलाई झापाबाट अत्तरिया पुर्‍याएको भाडा मागिरहेको छ । उनीहरुसँग भाडा दिनका लागि पैसासमेत छैन ।
उनीहरुमध्येकै एकजना लोकजंग शाहीले भने, “सर गाडीवालाले पैसा मागिरहेको छ । हामीसँग पैसा पनि छैन । झापाबाट हिँड्ने दिन भद्रपुरमा खाना खाएको तीन दिन भयो खानासमेत पाएका छैनौं । अब कहाँ जाने ? केही थाहा छैन ।”
स्थानीय तहले आ-आफ्ना स्थानीयहरुलाई उद्धार गर्छ भन्‍ने सुनेका उनीहरुले भने, “हाम्रा स्थानीय तहलाई भन्‍न मोबाइलमा ब्यालेन्स पनि छैन सर । कसरी सम्पर्क गर्ने ? ठूलो समस्यामा पर्‍यौं ।”
उनीहरु सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका विभिन्‍न जिल्लाका रहेका छन् । जसमध्ये बाजुराका १५ जना छन् । अछाम र बझाङका ५-५ जना, बैतडीका ९, डोटीका १० जना, दार्चुला र डडेल्धुराका १-१ जना छन् । उनीहरुमध्ये २५ जना विद्यार्थी छन् भने अन्य दैनिक मजदुरी गर्नेहरु छन् । उनीहरुमध्ये एक बाजुरा, दुई अछाम र दुई बैतडीका महिलाहरुसमेत छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्‍न सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बधोन गर्दै भन्‍ने गरेका थिए, “देशमा जनताको सरकार छ । अब कोही भोकै मर्दैन ।” तर, लकडाउनका कारण उनीहरुजस्तै विभिन्‍न स्थानमा सयौं अलपत्र परेका छन् । सरकारले उनीहरुका लागि अन्य व्यवस्था त के भोक मेटाउन पनि सकेको छैन । #बाह्रखरी